Ukubhuloga Kwebhizinisi: Amaqhinga Amasha wezinja ezindala | Martech Zone
Ukubhuloga Kwebhizinisi: Amaqhinga Amasha wezinja ezindala
NgoLwesine, July 24, 2008 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Akekho ongaphikisana ngokuphelele ukubusa kwamabhulogi ngokuthandwa futhi, bese kuthi isikhundla senjini yokusesha. Ukuthandwa kwamabhulogi kuvela kule ndlela entsha yokuxhumana eguquke kuwebhu - enokwakheka ngokwengeziwe, engacoliswanga kangako futhi eyiqiniso.
I-Technorati iyalandelela Amabhulogi ezigidi ze-112.8 okwamanje kwenziwa izinkulungwane zamabhulogi ihora ngalinye. Izinhlelo zomthombo ovulekile njenge WordPress, Blogger, noma I-Typepad ne-Vox yenza ukubhuloga kube lula. Kuyo yonke inkampani, uma kungenjalo yonke iminyango ye-IT, uzothola okungenani umuntu oyedwa ukubhuloga. Kulula:
Bhala + Shicilela = Ibhulogi?
Kuzwakala kulula, akunjalo? Yileyo ndlela ngqo abaphathi bezentengiso abaphathwa ngayo lapho singena enhlanganweni futhi sixoxa ngokubhuloga njengengxenye yamasu wokumaketha jikelele. Izinkampani zixoxa ngokubhuloga njengokuthile okusohlwini lwamasheke luka-2008. Buza inkampani uma ibhuloga futhi uthola i- “yup” eyisibopho. Uma bengakakwenzi lokho, babuze ukuthi babheka yiphi ipulatifomu bese baphendula nganoma iyiphi “yamahhala”
Uma ukubhuloga ezinkampani kwakulula kangaka, kungani inani lamabhulogi lehla? Kunezizathu ezimbalwa:
Izingxoxo ezingathandeki azihehi abafundi.
Amabhulogi amabhizinisi aphenduka ukukhishwa kwabezindaba okuphindiwe.
Izihloko azivezi imibono noma ukubuyela emuva.
Okuthunyelwe akunabo ubuholi bobuntu nokucabanga.
Ngamafuphi, isizathu sokuthi kungani amabhulogi ebhizinisi ehluleka yingoba izinkampani zifaka isicelo sokubhuloga sohlelo lwazo lokuphathwa kokuqukethwe.
Amabhizinisi Adinga Usizo!
Kunezihluthulelo ezimbili zokubloga okuphumelelayo amabhizinisi angakunaki nhlobo:
Ingxenyekazi esekela isu.
Noma yimuphi umuntu we-IT onamandla omqondo angaphonsa i-WordPress kuseva futhi anikeze i-CEO ukungena ngemvume. Le yindlela eqinisekile yomlilo yokuqinisekisa isikhathi esifushane sebhulogi lebhizinisi lakho. Kufana nokuphuma futhi uqale ibhizinisi lokunakekela i-lawncare ngoba uthole ukuthi ungaqala kanjani umshini wakho wokugunda utshani.
Ukuthola igunya nemiphumela yenjini yokusesha kudinga ukuhlaziywa okubucayi kwebhizinisi lakho, izimbangi zalo, ubukhona bewebhu njengamanje nokuthi ungathanda ukuthi ibe kuphi.
Ukusebenzisa ipulatifomu yokubhuloga eqondisa i-blogger ngaphandle kwenqubo ngenqubo yokuthumela, kusiza umbhali ongakwazi ukusebenzisa ubuchwepheshe ukukhiqiza okuqukethwe okulungiselelwe, bese ekuhlelela ngokuzenzakalela lokho okuqukethwe kwemiphumela yokusesha ephezulu (okunqunywe ekuhlaziyweni kwangaphambilini necebo) kuyisihluthulelo sempumelelo yebhulogi yebhizinisi.
Ukubhuloga akuyona impumelelo ngobusuku obubodwa. Imiphumela emihle yokubhuloga idinga umfutho nokuhlaziywa njalo nokuthuthuka. Ngokubhuloga kwebhizinisi, ngingabuye ngikhuthaze indlela yethimba lapho iqembu liqinisekisa khona ukuthi abantu basebenzisa isu nohlelo oluphelele.
Okuqukethwe akuqhutshwa noma kuvunyelwe yi-Marketing. Uma kukhona ifayela le- buthaka ingxoxo okufanele ibe nayo, imvamisa ingenxa ye- ukuhlanza kokuqukethwe ngumfowethu omkhulu.
Isu + Bhala + Shicilela + Ukulungiselela = Ibhulogi Lebhizinisi!
Ngiyayithanda i-WordPress futhi le bhulogi ngeke iguquke kuleyo ndawo yokubhuloga. Noma kunjalo, lokho akusho ukuthi i-WordPress yisixazululo esifanelekile. Esikrinini sami esithi 'Dala Okusha', akukho okungaphansi kwezingu-100 ongakhetha kuzo… amathegi, imikhakha, isimo, izingcaphuno, ukulandelela emuva, ukuphawula, ukuphawula, ukuvikelwa kwephasiwedi, izinkambu zenkambiso, isimo seposi, okuthunyelwe okuzayo…. ukububula. Phonsa lesi sikrini phambi kwanoma ngubani futhi kuyethusa kancane!
Ibhizinisi lakho akufanele lifundise abasebenzisi ukuthi bangayisebenzisa kanjani ipulatifomu yokubhuloga. Kufanele ukwazi ukungena ngemvume ngokweqiniso, uthumele futhi ushicilele. Vumela uhlelo lokusebenza lwenze okunye!
Nasi isibonelo esisodwa sesici esihle ozosithola I-Blogware yokuhlanganisa, ithuluzi lokusiza umbhali ukuthi agxile kumagama angukhiye nemishwana ngaphakathi kokuthunyelwe kwakhe ukuze kube namandla okuthathwa yizinjini zokusesha.
Uma ubhala amagama ambalwa noma amagama amaningi kakhulu, amaphuzu akho azokwehla! Ithuluzi elincane elikhangayo elibhalwe ngumngani, uPJ Hinton. Ababhali bayelulekwa ukuba babhalele umfundi, kepha bangakuthola lokho futhi ukuminyana kwamagama amakhulu ngethuluzi elihlakaniphile elinje.
Ithuluzi elifana neCompendium liza nethimba lochwepheshe abakusiza ukwakha isu, kanye nohlelo lokusebenza olukusiza ukuthi usebenzise ngempumelelo kulelo qhinga. Futhi awudingi ngisho nomuntu wakho we-IT ukuthi azibandakanye! Uma ungafisi ukubona ibhulogi yakho yebhizinisi yehla ngamashubhu, thola abantu abafanele bese uthola ithuluzi elifanele ukwenza ngalo.
Ngibe nenjabulo yokuvakashelwa ikhofi noChris Baggott namhlanje ekuseni (uthumele ngocwaningo lweForrester kubhulogi, futhi.
Ukuhlanganiswa is ukusebenza - ukugxila kokuqukethwe nokushayela amathani wethrafikhi amabhizinisi abhalisile. Abafundi bayazibandakanya futhi bayabuya - futhi amabhizinisi ayakhula kusuka emiphumeleni. Yisikhathi esithandekayo senkambiso yenkampani kanye neCompendium ehluke ngokuphelele kulezo zitayela ezibonwe yiForrester.
Ukudalulwa Okugcwele: Ngingumninimasheya eCompendium futhi ngasebenza noChris no-Ali ezinsukwini zokuqala kakhulu. I-Compendium kwakuyizingxoxo ze-theory ne-whiteboard emuva ngaleso sikhathi, kepha uChris nethimba bayiphendule leyo ngxoxo yaba yinkampani impela! Akuseyona inkolelo, uhlelo oluguqula ukubhuloga kwebhizinisi.
Tags: ukubhuloga ibhizinisiukubhuloga ezinkampanitechnorati
Kungani inethiwekhi ingekho kuwo wonke amaKharikhulamu?
Umsebenzi wobuciko ekusetshenzisweni nasekuklanyeni: Onehub
Jul 24, 2008 ngo-12: 26 PM
Amabhulogi webhizinisi angahle alahle ngoba abamukeli bokuqala abakaze bafunde ukuthi bangaguqula kanjani abafundi be-blog babe ngamakhasimende, inkinga ejwayelekile kumawebhusayithi amaningi. Manje, bazama amathuluzi ahlukile.
Angicabangi ukuthi ukubhuloga kwebhizinisi sekuhlolwe ngempela okwamanje, okungenani hhayi izinkampani eziningi ezingaphumelela ngakho. Lokho kungenxa yokuthi ukuthobela kuyinkinga enjalo.
Izinkinga zokuhambisana nazo zigcina izinkampani eziningi ezinhle kakhulu zingabhulogi. Izinkampani zomphakathi kufanele ziqaphele kakhulu ukuthi zingenzi izitatimende ezibheke phambili ezingayenga abatshalizimali ukuthi bathenge isitoko sabo. Izinkampani ezizimele eziholwa ababonisi (okungenzeka ukuthi zingama-blogger amahle kakhulu) azizimisele ukuhlanganyela izinqubo zazo zokucabanga nabancintisana nabo.
Ngakho-ke, ubani osele? Izinkampani zokumaketha kanye nezinkampani eziphakathi nendawo ezingekho ngokwanele ukuba ziye emphakathini noma embonweni ngokwanele ukushintsha umhlaba. Lokhu kuholela kumabhulogi anesidina agcwele izinkampani ezibambisanayo kanye nokukhishwa kwabezindaba.
Impendulo? Yebo, ngisasebenza kulokho. Ukuthola abantu abafanele ukubhuloga akulula. Kepha uma sebeqale, nazi izeluleko zokwenza kube lula kubabhlogi bebhizinisi ukugcina lowo mlilo uvutha:
1) thola usizo. Umphathi omkhulu kungenzeka kube yindoda oyifunayo kulayini webhulogi, kepha akunakwenzeka ukuthi ayenze ize kuqala. Faka omunye umuntu ophethe ngokuqinisekisa ukuthi okuthunyelwe kuyabhalwa futhi kulayishwe.
2) dala ikhalenda lokuhlela. Thola ukuthi yini ozokhuluma ngayo kusengaphambili, uyiqede kudlule ithimba lezomthetho bese wenza ababhali bakho basebenze kokuthunyelwe.
3) bhala okudingwa ngamakhasimende akho. Kuyisidina kusengqondweni yomfundi (noma iso lombukeli, noma okuthile). Uma i-blog ihlose ukwengeza inani langempela kumathemba enkampani, kuzoba lula ukuguqula abafundi babe ngamakhasimende.
Ngiyabonga futhi ngokuthunyelwe okuhle.
Jul 24, 2008 ngo-12: 35 PM
Ngiyabonga Rick! Iseluleko esivelele. Siyabonga ngokuthatha isikhathi sakho kulokhu - kungakufanelekela ukuthola iphepha elimhlophe, eh?
Jul 25, 2008 ngo-6: 26 PM
Okuthunyelwe okuhle, njengenjwayelo.
Kepha ngifuna ukubuza, weza kanjani ngokufunda ngesici seCompendium osigqamisile? Ingabe iklayenti lakho liyayisebenzisa? Noma ngabe lokhu okuthunyelwe kwaxhaswa yi-Compendium? Ngempela yahlangana njengokuhweba.
Yazi ukuthi angikusoli, noma ngabe bekuyimali ekhokhelwayo ngabe ngisacabanga kakhulu ngawe, kepha ngifisa ukwazi kakhulu…
Jul 25, 2008 ngo-7: 45 PM
Azikho izinkinga lapho! Nginikeze ukuvezwa ekugcineni kweposi - ngisize ukwakha isisekelo sokuqala seCompendium noChris Baggott futhi ngingumninimasheya ebhizinisini.
U-PJ ​​Hinton ungunjiniyela eCompendium futhi (kuyenzeka ngengozi) futhi naye 'uyindlala' yomunye Indebe kabhontshisi lapho ngihlanganyela khona. Bengikhuluma noPJ ngemibono ethile yokusiza i-blogger ukuthi ibhale njengoba ibhala - futhi i-PJ inginikeze ukuqonda ngalesi sici esingakakhishwa.
U-Ali Sales uqhamuke nombono futhi ngicabanga ukuthi uyakhazimula.
Jul 25, 2008 ngo-6: 35 PM
Doh! Ngasizathu simbe angibonanga ingxenye ethi “Ukudalulwa Okugcwele”, ngiyifunde kumfundi wami we-RSS futhi ngakuphuthele ngandlela thile. Uxolo ngokuthunyelwe kwangaphambili.
Jul 25, 2008 ngo-7: 46 PM
Akunankinga, Mike! Ngizohlala ngivulelekile njalo kuwe - futhi ngiyakwazisa ukuphonselwa inselelo. Ngicabanga ukuthi 'kungumsebenzi wami' njenge-blogger. Uma ngizobhala amagama, kungcono ngikwazi ukuwaxhasa!
Jul 31, 2008 ngo-5: 52 PM
Ukubhuloga kuyindlela enhle yokuthi inkampani ifinyelele abantu abaningi. Ivumela inkampani ukuthi ikhombise uhlangothi oluhlukile lwebhizinisi labo. Ngokwengeziwe, kusiza ukukhuphula izinga labo kunjini yokusesha. Ngoba ukubhloga kuyindlela enhle yokuxhumana namakhasimende akho nokwandisa inethiwekhi yakho yokuxhumana nabantu, udinga ukuthi uqaphele futhi uhambisane nokubhuloga kwakho.